Abanye abalandeli Benguqu Bathi Kabamthembi UCuthbert Dube Ukukhokhela iZIFA
WASHINGTON DC — Uzulu weZimbabwe ukhanya elembono etshiyeneyo ngokukhethwa njalo kuka Cuthbert Dube ukukhokhela inhlanganiso yeZifa kakuhle okweminye iminyaka emine elandelayo kulandela izigigaba zeholo lakhe ebeliqonge okwesabekayo akade elithola kuhlangothi lukahulumende olwe Premier Service Medical Aid Society- PSMAS, inengi lezisebenzi zona zisidla inqweqwe zomlomo.
Abanye abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kabasamthembi uDube ngemva kwezigigaba zeholo lakhe leli ele PSMAS ukuthi angenelisa na ukuba lesifiso sokuqeda inhlupho ezibhekane leZIFA yena ekhanye engazweli izisebenzi zePSMAS.
Sikhuluma kanje i-ZIFA ibikwa ibhekane lenhlupho ezesabekayo zokusilela kwemali, okubangele lokuthi iqembu elimela isizwe elamaWarriors lehluleke ukulolonga kuhle lilungiselela ukudlala emicintisweni yamanye amazwe awezwekazi leAfrica loba eyemhlabeni jikelele.
Osanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kaDube u-Omega Sibanda yena uthi ulethemba lomsebenzi womunye wakhe njalo uyasekela ukukhethwa kukaDube. USibandla utshele uChris Gande weStudio Seven ukuthi kumele uzulu anike uDube elinye ithupha lokulungisisa inhlupho ezibhekane leZIFA eminyakeni emine elandelayo.
Ocubungula umdlalo wenguqu u-Muziwethu Hadebe yena uthi sokukuye u- Dube ukuthi asebenze gadalala ukuze abangala themba laye bahle bavale eyabo imilomo.